Nyocha Doogee Ibiza F2 | Androidsis
Anyị na -eji nyocha ọhụrụ nke ọdụ ụgbọ ala sitere na akara Doogee a ma ama nke China, akara nke na -agafe oge na ezi ọrụ ya, na -enweta ndị na -eso ụzọ na -enweghị atụ ebe ọ bụla emere ya mara. Oge a anyị ga -egosi gị Nyocha Doogee Ibiza F2, ọdụ ụgbọ elu ọhụrụ ewepụtara naanị izu ole na ole gara aga nke ezubere ịlụ ọgụ na ọkwa ntinye nke sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Oge a anyị nwere ọnụ nwere enyo 5 ″ IPS na 960 x 540 pikselụ mkpebi kpaliri site na processor na -enweghị atụ Mediatek 6752 quad-core 1,2Ghz Teknụzụ 64-bit nwere ọmarịcha Mali T760 GPU nwere ike ịkwaga ụdị egwuregwu na ngwa Android niile. Ọnụ na mkpịsị aka anyị maka naanị 129,99 dollar na nke dị n'okpuru anyị ga -agwa gị ike na adịghị ike ya.
1 Nkọwa nka na ụzụ nke Doogee Ibiza F2
2 Nke kacha mma na Doogee Ibiza F2
3 Nke kacha njọ bụ Doogee Ibiza F2
Nkọwa nka na ụzụ nke Doogee Ibiza F2
Nlereanya Ibiza F2
Usoro njikwa Android 4.4.4 Kit Kat
Ihuenyo 5 "IPS nwere mkpebi qhd 960 x 540 na 240 ppi
Nhazi MTK6752 QuadCore na 1 Ghz na teknụzụ 2-bit
Nchekwa ime 8 Gb kewara naanị 1 Gb maka ịwụnye ngwa na egwuregwu yana 12 Gb maka ịchekwa ọdịnaya na faịlụ dị iche iche. Nkwado MicrSD ruo 4 Gb
Njikọ DualSIM - LTE - 3G - 2G - Bluetooth - Wifi - GPS na a -GPS - USB OTG
Rear igwefoto 13 mpx na FlashLED
Batrị 2000 mAh
Ọkpụrụkpụ 7 mm
Ahịa 125 Euros ihe ruru.
Nke kacha mma na Doogee Ibiza F2
Nke kachasị mma n'enweghị obi abụọ nke a Doogee Ibiza F2 anyị na -ahụ ya na oke mmiri nke sistemụ arụmọrụ gam akporo 4.4.4 Kit Kat ekele ya Mediatek quad-core processor dị ike nwere teknụzụ 64-bit nke bụ ihe atụ nke processor Qualcomm Snapdragon 410 otuto etinyere na ọdụ dị ka Motorola na Moto E 2015 ma ọ bụ xiaomi na RedMi ọhụrụ ya.
N'aka nke ọzọ, ihe ndị ọzọ a ga -eme ka ọ pụta ìhè na ngwaọrụ akụnụba a ebe o mere ya ka ọ bụrụ ndị na -eto eto, anyị nwere ike ịhụ ya ogo igwefoto gị ma n'ihu 5 mpx na azụ nke 13 mpx ka agwara eziokwu, ha na -eme ọmarịcha foto ọbụlagodi n'ọnọdụ ọkụ dị ala.
Akụkụ ọzọ iji gosipụta nke ọdụ ụgbọ ala a na -elekwasị anya na akụ na ụba na -abaghị ọgaranya, anyị nwere ike ịhụ ya na ngalaba njikọta ebe enwere ekele ndakọrịta na netwọkụ LTE ma ọ bụ 4G na ntinye nke njikọta USB-OTG.
N'ikpeazụ, dị ka ihe anyị ga -eme ka ọ pụta ìhè nke ọma, bụ ọrụ ụmụ nwoke gbakwunyere na Doogee ga -enyere anyị aka jikwaa ihuenyo anyị yana omume dị iche iche site na mmegharị ahụ ma ọ bụ ntinye nke ngalaba ọhụrụ na ntọala gam akporo nke anyị ga -enwe ike hazie nchekwa batrị iji nweta arụmọrụ ka mma na ya na -agụsi anyị agụụ ike.
Nke kacha njọ bụ Doogee Ibiza F2
Na nkebi nke kacha njọ Doogee Ibiza F2, Ihe anyị ga -eme ka ọ pụta ìhè na ọ na -ewute anyị nke ukwuu ebe ọ bụ ọnụ na arụmọrụ siri ike, ọ bụ obere ebe nchekwa dị n'ime ka ha hapụrụ maka itinye ngwa na egwuregwu, ọ bụ na ọ naghị esiri ike. 1,2 Gb nke nchekwa dị n'ime, anyị ga -enwe ike ịwụnye ngwa pere mpe yana egwuregwu pere mpe.
Akụkụ ọzọ ịkatọ na ime ka ọ pụta ìhè, n'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị na -ahụ ya na batrị ya, a batrị nwere ike naanị 2000 mAh nke ahụ na -enye anyị nnwere onwe zuru oke nke awa atọ nke ihuenyo na -ejikọ njikọ anyị na -eji na ịtọ ncha ihuenyo ka ọ kacha dị obere.
Ikpeazụ na ikekwe opekata mpe, anyị na -ahụ ya n'ịdị mma nke ngwaọrụ, nke anyị dị ka adịghị ike, na ọ bụ ezie na n'ebe ndị nwere obere mkpọtụ a na -anụ ya nke ọma, na ebe nwere gburugburu mkpọtụ ọ na -ahapụ ihe dị ukwuu.
Njirimara Doogee Nanị
Nchekwa nchekwa dị n'ime
Ka bụ gam akporo 4.4.4 Kit Kat
Batrị dị ala nke naanị 2000 mAh
Ụda adịghị ike n'ebe mkpọtụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nyochaa Doogee Ibiza F2, QuadCore 64-bit maka naanị $ 129,99
Nsogbu mbu na Samsung Galaxy S6: oriọna ikanam nke ụfọdụ nkeji anaghị agbanyụ
OnLeaks ekpughere ntụgharị ndị ọzọ nke Xperia Z4